Tsy manadino ireo namany i Sarajevo ary Zagreb no dikan'izany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy manadino ireo namany i Sarajevo ary Zagreb no dikan'izany
Zagre renivohitr'i Kroasiab dia niharan'ny horohoron-tany mafy indrindra tao anatin'ny 140 taona ny alahady maraina, ary manohana tanteraka i Sarajevo any Serbia mpifanila vodirindrina aminy.
Nandefa hafatra feno fitiavana sy fanohanana an'i Zagreb i Sarajevo ny alahady hariva, nanazava ny Lapan'ny tanàna mariky ny manga ary nampiseho fo teo anelanelan'ny fanafohezana ny anaran'ireo tanàna roa ireo.
“Rehefa miara-miady amin'ny areti-mandringana coronavirus isika rehetra, dia voan'ny horohoron-tany matanjaka indrindra teo amin'ny tantarany ny Tanànan'i Zagreb. Ny renivohitr'i Bosnia dia mandefa hafatra any amin'i Zagreb sy any Kroasia rehetra fa mieritreritra ny vavakay ianareo anio hariva,
"Ireo fanamby sarotra atrehinay ireo dia hanamafy ny fisakaizanay sy hampitombo ny fiaraha-miasa," hoy ihany izy.
Ny ben'ny tanànan'i Sarajevo, Abdulah Skaka, dia nandefa hafatra ihany koa tamin'ny mpiara-miasa aminy tany Zagreb, Milan Bandic, ny alahady teo.
"Matoky aho, Andriamatoa Bandic, fa ianao sy ny mpiray tanindrazana aminao, ny fitantanan-draharaha sy ny governemanta Kroaty dia hitsangana indray ary ho tafarina amin'ity loza mahatsiravina ity, satria handresy ny areti-mifindra coronavirus isika amin'ny firaisankina sy firaisankina," hoy izy.
Nanambara ny fanovana iraisam-pirenena momba ny mpitarika ny MGM Resorts
Hanohy ny famokarana ampahany ny Airbus